नेहरू र प्रधानमन्त्री नेहरू – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नेहरू र प्रधानमन्त्री नेहरू
२०७० चैत्र २१, शुक्रबार ०२:०८ गते
भारतीय संघका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू रहुन्जेल बीपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेको हिन्दुस्थान भनेको जवाहरलाल नेहरू र उनको प्रशासनलाई हो । कुरोलाई यस रुपमा हेर्ने हो भने ठाउँठाउँमा हिन्दुस्थानसँगको बीपीको असन्तुष्टि बुभ्mन सजिलो हुन्छ । पद्म शमशेरलाई नेपाल फर्काउन बीपीको मद्दत माग्ने नेहरू जब मोहन शमशेरको कैदबाट लेखिएको बीपीको चिठ्ठी पढ्छन्, बीपीकै शब्दमा नेहरू रून्छन् । तर बीपी अनशन बसेर मर्न लागेको कुरा बीपी पत्नीबाट जयप्रकाश नारायणले थाहा पएर आफू इलाज गराइरहेको पटना अस्पतालबाट नेहरूलाई फोन गर्दछन्, तबमात्र राजदूतमार्पmत मोहन शमशेरलाई दबाब दिन्छन् । यो फरक स्पष्ट देखिन्छ, पहिलेको नेहरू र प्रधानमन्त्री नेहरूमा । परिच्छेद २५ मा बीपी भन्छन्– नेहरूको त्यो दबाबपछि रातारात २४ घन्टा लगाएर अर्को घर नै तैयार गरेर बीपीलाई कालकोठरीसरहको थुनाबाट त्यसको ३–४ बटा भ्mयाल भएको कोठामा सारिन्छ ।
यो मतभेद अझ राजालाई दरबारबाट भगाएर ल्याउने कुरामा अझ ठूलो हुन्छ । राजाको नाममा क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यसैले राजालाई दरबारमा राणाहरुकै नियन्त्रणमा रहन दिनु ठीक थिएन । परिच्छेद २६ को अन्ततिर उनी भन्छन्– ‘हामीहरुले सशस्त्र क्रान्ति गर्दाखेरि राजाको स्थिति के हुने ? राजाको नाउ“बाट हामीले क्रान्ति गर्दा राजालाई त उनीहरुले समाती हाल्लान्, त्यसो हुनाले राजालाई त्यहाँबाट भगाउनु पर्दछ ।’ त्यसैले, राजालाई भगाएर पाल्पामा राख्ने र त्यहीँ नया“ सरकार बनाउने र त्यसलाई हिन्दुस्थानमार्पmत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने । दरबारबाट एयरपोर्टसम्म आउन सात–आठ मिनेट लाग्ने भएकाले हेलिकोप्टर भए सेना सक्रिय हुनुभन्दा पहिले नै हेलिकोप्टर उडिसक्ने आँकलन गरेर हिन्दुस्थानसँग हेलिकोप्टरको माग गरियो, तर उसले दिएन । त्यसपछि राजा बाहिर निस्केको बेला सम्पर्क गरेर भगाएर गढीमा ल्याउन गणेशमानजीको नेतृत्वमा टोली राजधानी गयो, तर त्यो टोली नै समातियो । यो योजना नेहरूलाई थाहा भएको अनुमान कठिन छैन ।
यो योजना असफल भएपछि राजा तर्से, बीपीले अर्को योजना बनाउनुभन्दा पहिल्यै नै राजा सपरिवार भारतीय दूतावासमा पसे । यहाँनेर नेपाली कांग्रेसको योजनाअनुसार राजा दूतावासमार्फत भारत पुगेको भन्ने मान्यता झूटो हुन्छ । बीपीले पटनामा भारतीय दूतावासको प्रसारणसँग जोडिएको आकाशवाणीबाट यो खबर पाएका थिए । परिच्छेद २७ मा उनले यस घटना सुन्नेबित्तिकै आफूले ‘अब हाम्रो हातबाट गयो’ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । जयप्रकाश नारायणले बीपीलाई सल्लाह दिएका छन्, ‘तिमी एउटा वक्तव्य देऊ, तुरून्तै देऊ । किनभने अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन, तिम्रो वक्तव्य र राजा भागेको एकैचोटि छापिन्छ । त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खबर पनि हुन्छ र उताबाट प्रचार पनि हुन्छ ।’ जयप्रकाश नारायणको यो सल्लाहअनुसार बीपीले वक्तव्य दिए । यसैको कारणले नेपाली कांग्रेसको क्रान्ति र राजाको यो पलायनलाई जोडियो, यो भ्रम अहिलेसम्म पनि छँदैछ ।
नेपाली कांग्रेसको क्रान्तिमा नेहरूको कहिले सहयोगी र कहिले बाधक भूमिका धेरै चोटि देखिएको छ । परिच्छेद २८ मा बीपी उल्लेख गर्दछन्– ‘मलाई जवाहरलालजीले भनेका के थिए भने अरु कसैलाई नपत्याउनू, तीन जनालाई पत्याए हुन्छ । एउटा बंगालको मुख्यमन्त्री विधानचन्द्र राय, एउटा बिहारको मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हा र अर्को यु.पी. को मुख्यमन्त्री गोविन्दबल्लभ पन्त ।’ आफूसँग जति कुरा गर्न सकिन्छ, त्यति नै यी तीन जनासँग गरे हुन्छ भनेकाले क्रान्तिको निमित्त हतियार संकलन र त्यसलाई नेपाल सीमासम्म ल्याउन बीपीले श्रीकृष्ण सिन्हा र गोविन्दबल्लभ पन्तको सहारा लिएका छन् । त्यसबाहेक, अन्य किसिमका मद्दत पनि नेहरूले क्रान्तिको बेलामा गरेका छन् । यस उदाहरणले त नेहरू–बीपी सम्बन्ध एकदमै आत्मीयजस्तो पनि लाग्छ । तर, यही आत्मीय सम्बन्ध कटु भएको उदाहरण त्यसबेला हुन्छ, जब ‘तपाईंलाई त हथकडी लगाउने थिए’ भनेर नेहरू बीपीलाई भन्छन् । नेहरूले बीपीलाई हथकडी लगाउने कुरा दुईचोटि गरेको प्रसंग आत्मवृत्तान्तमा छ ।
वीरगन्जबाट लडाईंमा जितेर ल्याएको पचास लाख रूपैयाँले संगठनमा फाटो ल्याउने छा“टका“ट भएपछि यो किचकिचले गर्दा रूपैयाँ हिन्दुस्थानले जफत गरिदेला भन्ने डर पैदा भयो । त्यसैले, त्यो रूपैयाँ राजालाई सुम्पेर सुरक्षित गर्ने योजना बन्यो । राजा दिल्लीमा थिए हैदरावाद हाउसमा भारतीय सरकारको पाहुना बनेर बसेका, त्यही पु¥याउन पटनाबाट प्लेनमा रूपैयाँ हालेर राति दिल्ली गए । त्यो रूपैयाँ जफत भयो, त्यसैको विरोध गर्न भेट्न गएका बीपीलाई नेहरूले हथकडी लगाउने थिए भनेर भनेका हुन् । बहाना भने तपाईंहरुले हल्ला मच्चाएर रूपैयाँ ल्याउनुभयो । यो रूपैयाँ किन राजालाई पु¥याउन ल्याउनुभयो भन्ने भयो । यो कुराबाट बीपी सन्तुष्ट भए वा भएनन्, त्यो त उनले उल्लेख गरेनन् । तर, त्यो रूपैयाँ क्रान्तिमा प्रयोग हुन पाएन ।
विराटनगरमा बडाहाकिमको घर कब्जा गर्न हतियार अपुग भएर नेहरूसँग हतियार माग्न बीपी दिल्ली गए । नेहरूलाई अफिसमा भेट्न खोजे । नेहरूको सचिव जोन मथईले नेहरूलाई भेट्न दिएन । विवश भएर उनले आपूm आउनुको प्रयोजन बताउनुप¥यो, तैपनि त्यो दिन भेट हुन सकेन । बीपी क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैछन् भन्ने नेहरूलाई थाहा थियो । थाहा मात्र के र, त्यस क्रान्तिमा नेहरूको पनि सहयोग थियो । त्यस्तो मान्छे भेट्न आउँदा पक्कै केही मह¤वपूर्ण तथा गोप्य कुरा हुन्छ भन्ने नेहरूले सोच्न सक्दैन थिए भन्ने कुरा भन्नु र औँसीको रातमा टन्टलापुर घाम हुन्छ भन्नु एकैजस्तो हुन्छ । यसरी जोन मथईलाई कुरा खोल्न बीपीलाई बाध्य बनाएर छा“स्ने मौका नेहरूले बनाए । बेस्कन छा“से हतकडी लगाइदिन्छुसम्म भन्न पुगे । हतियार दिनु थिएन, दिएनन् । तर, त्यसको निमित्त यो अपमानजनक तरिका अपनाए । बीपी र नेहरू सम्बन्धको कुरा यसमा मात्र सकिन्न, त्यो त अझ दिल्ली सम्झौता गर्ने बेलामा टड्कारो तरिकाले देखिएको छ । नेपालमा क्रान्ति सफल भइसकेपछि त यो मतभेद झन् बढेर गएको छ ।